Fitafiana tsara tarehy amin'ny fahavaratra
Ny fahavaratra dia ny vanin-taona izay ahafahanao mampiseho ny tenanao amin'ny voninahitra rehetra, ary mampiseho ny tsirony tsara sy ny fahatsapana ny fomba. Na izany na tsy izany, na inona na inona lazain'ny olona, ​​ny akanjo maotina dia manintona kokoa amin'ny vatany misakafo toy ny miaraka amin'ny akanjo ambony ambony sy kiraro mavesatra. Ny fahazavana sy ny fitiavan-tanindrazana amin'ny sary fahavaratra dia manome endrika manjavozavo ary azo antoka fa hahasarika ny fisainana tadiavina. Noho izany, manomboka amin'ny taona isan-taona, ireo mpanakanto dia manome akanjo tsara tarehy ho an'ny fahavaratra ho an'ny tovovavy, izay manampy amin'ny fanatontosana ny nofinofy sy ny fiovana rehefa avy mangatsiaka ny andro ririnina amin'ny ririnina sy ny lohataona.
Akanjo maotina amin'ny fahavaratra ho an'ny vehivavy
Araka ny fampisehoana, ireo akanjo tsara tarehy tsara tarehy - tsy fanamboarana akanjo izany. Raha ny zava-misy, ny fahasamihafana eo amin'ny garderobe kapsule dia ny fahaizany sy ny fahafahana manampy haingana amin'ny toe-javatra rehetra. Ny fananana zavatra mahafinaritra, tsy vitan'ny manamboatra ny endriny fotsiny ianao ary manantitrantitra ny tsirony mangatsiaka, fa mamy koa ny tenanao, izay zava-dehibe ho an'ny ankizivavy rehetra. Ankehitriny, nanolotra lisitry ny fitafiana kely ho an'ny fahavaratra ny stylists androany, izay, tsy isalasalàna, dia hanamboatra ny tompony. Mazava ho azy, ny lisitra dia mety miova arakaraka ny safidy tsiro.
Chiffon amin'ny ankapobeny . Iza no afaka mandalo ankizivavy iray ao anaty chiffon amin'ny ankapobeny ka tsy mihaino azy? Raha toa ny modelinao dia vita avy amin'ny lafin-javatra matevina iray, dia azonao antoka fa ny hamamoana kely amin'ny sary dia hanome volo fotsiny.
Akanjo sy akanjo miaraka amin'ny akanjo fohy . Ny kitapo toy izany dia mety ho an'ny vehivavy miasa. Mividiana silhouettes maivana amin'ny ririnina na miaraka amin'ny singa manantitrantitra ny vehivavy, ohatra ny tavy ambony. Ary ny mpankafy ireo stylist tsy mahazatra dia manolo-kevitra ny hanolo ny lobaka miaraka amin'ny akanjo marevaka.
Shorts sy T-shirt . Ny fifandraisan'ireo akanjo ireo dia mifantoka foana amin'ny tongotra mamo, fa sady mampifanaraka koa ny fahatsoran'ny style sy ny mason'ny sary.
Skirt-masoandro ary ambony . Ny palma manidina sy ny tendrony fohy mampiseho ny kibo dia ny fihavanana, ny firaisana ara-nofo, ny toetrany. Noho izany, ny antokon'olona toy izany dia heverina ho iray amin'ny tsara indrindra.
Toe-trondro sy pareo . Ny andro fahavaratra dia andro fialan-tsasatra. Eto dia azonao atao ny mampiseho ny mombamomba anao tsara miaraka amin'ny fanampiana amin'ny palitao mahafatifaty tsara tarehy. Ny ankizivavy iray ao anaty akanjo mifamatotra amin'ny tratra na ny felan'ny pareo, dia azo antoka fa hisarika ny saina ho amin'ny tenany.
Ny akanjon'ny vehivavy avy amin'ny plaschevki amin'ny sinety mahafaty
Lalao maoderina mandritra ny fahavaratra
Sandam-be amin'ny lohataona
Blue down jacket - amin'ny akanjo sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Ny zaza 3 volana dia fivoarana tokony ho afaka?
Dutch Dog Dog
Cindy Crawford dia miala
Fandroana tsy mahazatra 2013
Fandatsahana ranomandry eo amin'ny fitaratra amin'ny trano fisakafoanana
Fampakaram-bady amin'ny fomba fitetezana
"Summer" amin'ny lokon'ny karazana "color"
Bibikely tsy manjary - manimba sy mahazo tombony
Sakafo vaovao amin'ny kitapo
Fivoriana ray aman-dreny ao amin'ny tarika zokiny
Nahoana no nofinofy ny fanambadiana?
Ahoana ny fianarana telekinesi?
Ny valopy lohataona amin'ny tsiranoka avy amin'ny hopitaly
Ahoana ny fomba famindrana ny voaloboka any amin'ny toerana hafa?
Vareniki amin'ny karajia - fomba tsotra sy mahazatra ho an'ny sakafo matsiro sy mamy
Fialantsasatra any Italia
Fanatanjahan-tena ao amin'ny toeram-pisakafoana ho an'ny fatiantoka
Wedding volo sy makeup